September 6, 2020 445
रुकुममा एक महिला आफ्नो श्रीमानको ह त्या गरेको आरो’पमा पक्रा’उ परेकी छिन् । प’क्राउ पर्नेमा बफीकोट गाउँपालिका–१० की २६ वर्षीया अन्जना पुन बुढा रहेकी छिन् ।
बुढाले गत भदौ १० गते राति घरमै ३६ वर्षीय श्रीमान् भीमबहादुर बुढालाई ला ठीले नि र्घात कु ट पी ट गरेर ह त्या गरी श वलाई डोकोमा बोकेर भीरबाट फा लेको स्वीकार गरेकी छन् ।
केही दिन अघि श्रीमान् बेप’त्ता भएको भन्दै उनी गाउँ गुहा’र्न पुगेकी थिइन् । गाउँवासी मिलेर खोज तलासमा लागेपनि तीन दिनसम्म भीमबहादुरको श व भेटिएन । चौथो दिन दिउँसो घरदेखि २ सय मिटर दूरीमा पर्ने भीर तल स’डेगलेको अवस्थामा भीमबहादुरको श व फेला परेको थियो ।
रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख डिएसपी ठगबहादुर केसी भन्छन्, ‘पति बि योगको पी डा देखाएकी महिलामाथि सुरुमा शं का गर्न पनि सकिएन । दोश्रो दिनदेखि त्यस घरको खा नतलासी सुरु गरियो । घरमा लि’पपोत र श्रीमान सुत्ने गरेको खाट अन्यत्र सारे’को पाइयो ।’
प्रह’रीले त्यसपछि उनलाई शं काको घेरामा राखेर सोधपुछ गर्दा उनले आफूले ह त्या गरी डोकोमा बोकेर भी’रमा लगेर फा’लेको स्वीकार गरेको केसीले जानकारी दिए ।
प्र हरीका अनुसार त्यस दिन राति श्रीमान मदि’राले मा’तेर आएको र आफ्नो च’रित्रमाथि प्रश्न उठाएपछि आ’वेसमा आएर ह त्या गरेको ब’यान दिएकी छन् । उनलाई प क्राउ गरी कर्तव्य ज्या न मुद्दामा अदा’लतबाट म्याद थप गरी अनु सन्धान थालिएको डिएसपी केसीले बताए । – रातोपाटी बाट (साङ्केतिक तस्बिर)
Prevघट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहोस्
Next८ वर्षको छोरा लिएर अर्कैसंग हिडेकी राधाले पहिलो श्रीमानलाई छोरा फिर्ता गर्दा भयो रुवावासी (भिडियो सहित)
अंशु गुरुङ बनिन् बेलायती सेनाको क्याप्टेन ! सेनाको क्याप्टेन हुने उनी पहिलो नेपाली महिला!
घरमा कोही मानिस आँउदा घरको इज्जत जान्छ भनेर मलाई लुकाइन्थ्यो – रमेश प्रसाई (भिडियो सहित)